कुन महानगर प्रमुख उदाउलान् राजनीतिमा ? «
स्थानीय नेतृत्व हाँकेका व्यक्तिहरूले राज्य हाँकेको विदेशमा धेरै उदाहरणहरू पाइन्छ । स्थानीय नेतृत्वको अनुभवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्नेहरू छन् । कोरिया, पेरिस, जापान, फ्रान्स जर्मनी, न्युजील्याण्ड लगायतका विभिन्न देशमा राजधानी सहरको मेयरलाई भावी प्रधानमन्त्रीको दह्रो उम्मेदवारको रूपमा हेरिन्छ । तर सबै मुलुकमा त्यस्तो पनि छैन । कतिपय चाहिँ स्थानीय तहमा काम गरेपछि केन्द्रीय राजनीतिमा जाने चाह नराख्ने पनि हुन्छन् ।
सिटी मेयर्स रिसर्चका अनुसार ज्याक सिराग सन् १९९५ देखि सन् २००७ सम्म फ्रान्सको राष्ट्रपति भएका थिए तर उनी सन् १९७७ देखि सन् १९९५ सम्म पेरिसको मेयर थिए । यस्तै मेयर भएर प्रधानमन्त्री हुनेहरू पनि छन् । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपतिहरू जिस्कार्ड डे स्ट्यांग, फ्रान्सिस मिट¥याण्ड, निकलस सार्ककोजी, फ्रान्सिस होल्याण्डले स्थानीय तहबाटै राजनीतिक सिकेका थिए ।
एसियामै मेट्रो मनिलाका मेयरलाई सम्भावित राष्ट्रपतिको रूपमा हेरिन्छ । मेक्सिको सिटीमै पनि त्यही छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन पनि सन् २०१६ देखि सन् २०१८ सम्म लण्डन सहरको मेयर थिए । यो सबै देशीय परिवेशले निर्धारण गर्ने पक्ष हो ।
भीम पराजुलीको लक्ष्य प्रधानमन्त्री
होलान्–नहोलान् तर विराटनगरका मेयर भीम पराजुलीको धोको प्रधानमन्त्री हुने छ । राजनीतिक यात्राको छोटै समयमा ठूलो पद प्राप्त गर्ने थोरै व्यक्तिमध्ये पर्दछन् उनी ।
नेविसंघबाट राजनीति सुरु गरेका पराजुली महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको स्ववियू सभापति हुँदै दुई कार्यकाल विराटनगर कांग्रेसको सभापति भए । विक्रम सम्वत २०३१ सालमा जन्मिएका पराजुली विद्यालयस्तरमा नै राजनीतिसँग परिचित भए । पराजुली स्कुल समितिमा नेविसंघको अध्यक्ष भएका थिए । त्यो यात्रालाई उनले क्याम्पसमा पुग्दा थप सशक्त बनाए । पार्टीभित्र थुप्रै आकांक्षी हुँदाहुँदै पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट पाए । र, उपमेयरसहित अधिकांश वडामा कांग्रेसको जितलाई सुनिश्चित गरे ।
आफूले पाउने सेवा सुविधा पनि सामाजिक काममै खर्च गरिरहेका छन् । उनले पहिलो वर्षको विराटनगर–१ स्थित सयपत्री प्रावि, दोस्रो वर्ष विराटनगर–१९ स्थित जागृति आधारभूत विद्यालय, तेस्रो वर्ष ०७६÷७७ कोभिड राहत कोषलाई समर्पण गरेको उनले बताए । ०७७÷७८ को तलबवापत ५ लाख पीसीआर ल्याब खरिदका लागि दिने घोषणा गरेका छन् । “मैले स्कुल, कलेज, होटल र अस्पताल लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको छु,” उनी भन्छन्, “जीवनयापनका लागि त्यहाँबाट आएको रकमले पुग्छ । धेरै महत्वकांक्षा राख्नुहुँदैन ।”
इमान्दारिता र नैतिकताको धरातलमा उभिएर आफूले राजनीति गरिरहेको उनी बताउँछन् । राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिएको उनको भनाइ छ । “इमान्दारिता र नैतिकतालाई भुलेर लोभलालचमा लागियो भने राजनीतिमा अगाडि बढ्न सकिँदैन,” उनले भने, “आफू इमान्दार भयो भने आफू मातहतका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि हतपत्त पैसा खाने आँट गर्दैनन् ।”
पराजुलीको अबको लक्ष्य संघीय सांसद हुँदै मन्त्री हुने छ । “राजनीति गर्ने व्यक्तिको अन्तिम लक्ष्य भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने नै हो,” उनी थप्छन्, “तर, मेयरको कार्यकाल सकिएपछि संघीय सांसदमा उठ्ने इच्छा छ ।” तर आफूले मात्रै चाहेर नहुने उनको कथन छ । पार्टीले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार रहेको पराजुली बताउँछन् । जहाँसम्म महानगरको मेयर भएर पार्टीको प्रतिष्ठालाई उच्च बनाउने काम गरेको उनको दाबी छ । अहिलेसम्म कसैले औंला ठड्याउने अवस्था नरहेको पराजुली बताए ।
राजनीतिक रूपमा अघि बढ्ने आधार भनेकै आफूले महानगरको विकासमा गरेको योगदान रहेको उनी दाबी गर्छन् । त्यसो त उनको कामबाट वडाध्यक्षहरू पनि सन्तुष्ट छन् । नेकपाबाट विराटनगर–११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपाने मेयर पराजुलीको काममा कतै आलोचना गर्ने ठाउँ नभएको बताउँछन् । समन्वयात्मक भूमिकासँगै इमान्दारिता नै मेयर पराजुलीको गुण भएको उनले बताए । “हुन त म अर्कै पार्टीबाट वडाध्यक्ष भएको हुँ,” उनी भन्छन्, “तर, मेयरले कहिल्यै पनि पार्टीगत रूपमा हामीलाई हेर्नुभएको छैन । उहाँको कार्यकालमा काम पनि धेरै नै भइरहेका छन् । युवा भएकाले उहाँको राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल छ ।”
राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर दाहालले पनि पराजुलीको भूमिका जनपक्षीय रहेको दाबी छ । अहिले पछिल्लो कोभिडको समयमा त मेयर पराजुलीले परिवार र आफ्नो ज्यानको पनि प्रवाह नगरी काम गरिरहेको उनले बताए । “मेयर पराजुलीले जति काम गरेका छन् सबै इमान्दारितापूर्वक गरेका छन् । कहींकतै औंला ठड्याउने ठाउँ छैन ।” दाहालकै शब्दमा पराजुलीको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा जहाँजहाँ रहे त्यहाँ सफल भए । कांग्रेसभित्र पराजुलीको सुनौलो भविष्य रहेको दाहाल बताउँछन् । “जहाँसम्म पार्टीले स्थान दिन नदिने पार्टीभित्रको कुरा हो,” उनले थपे, “तर, इमान्दारिता र नैतिकताको संकट परेको बेला कांग्रेसभित्र पराजुलीजस्ता व्यक्ति हुनु गर्व मान्नुपर्छ ।” थुप्रै ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू आर्थिक विवादमा मुछिँदा मेयर पराजुलीले उल्टै आफैंले पाउने सुविधा पनि समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुले पनि उनको भविष्य उज्ज्वल छ भन्न सकिने विश्लेषक दाहालले बताए ।
विजय सरावगीको गन्तव्य माथिल्लो तह
वीरगन्ज महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगी विश्वका धेरै राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखहरू मेयरको जिम्मेवारी सम्हालेर नै पुगेको उदाहरण दिन्छन् । उनको पनि राजनीतिक गन्तव्य अन्तिम (माथिल्लो तह)सम्म पुग्ने छ । भन्छन्, “राजनीतिमा आइसकेपछि छोड्ने कुरै हुँदैन । अब अझ नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्ने इच्छा छ । पार्टी, संगठनको नीति, निर्देशनअनुसार जहाँसम्म जान सकिन्छ त्यहाँसम्म पुग्ने हो ।”
“हामी एउटा यस्तो ऐतिहासिक घडीमा निर्वाचित भयौं कि राज्य सञ्चालनको अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अनुभव गरिरहेका छौं,” उनी थप्छन्, “आफैंले ऐन, कानुन तथा नियमलगायत सबै बनाउँदै जनताको दुःखपीडा समाधानको कोशिस गर्दै, विकास निर्माणलगायतका कामहरू गर्दैै हरेक क्षेत्रका अनुभव प्राप्त गर्दै अघि बढिरहेकाले स्वाभाविक रूपमा अबको बाटो भनेको माथिल्लो तहसम्म पुग्ने नै हो ।”
राजनीतिको लख काट्नेहरू अब विजयको राजनीतिक यात्रा अझै माथिसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना पनि देख्छन् । तर कतिपयले भने व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति पहिलो पटक कार्यकारी तहमा पुगेर जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने राजनीतिक गन्तव्यमा विराम लाग्ने विश्लेषण गरेका छन् । राजनीतिको अन्तिम गन्तव्यसम्म पुग्ने एउटा आधारस्तम्भ भने मेयर सरावगीको सुरु एकथरीको भनाइ छ ।
०६२÷६३ को आन्दोलनपछि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या निकै बढेको देखिएको छ । आर्थिक रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा मात्रै सहयोग गर्ने गरेका निजी क्षेत्रबाट पछिल्लो समयमा वैचारिक रूपमा नै प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरू मध्येका हुन् सरावगी ।
उनले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरममा २०७३ चैत ६ गते औपचारिक रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरे । व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट केही समयअघि मात्रै राजनीतिमा प्रवेश गरेर राजनीतिक रूपमा परिपक्व व्यक्तिलाई निर्वाचनमा पराजित गर्नु सरावगीलाई कम चुनौतीपूर्ण भने थिएन । तर पनि उनका बुबा स्व. चिरञ्जीवीलाल सरावगी व्यवसायमा भन्दा पनि राजनीतिक र सामाजिक सेवामा बढी सक्रिय रहेकाले उनकै प्रेरणाले पनि विजय सरावगीलाई राजनीतिमा सहज बनायो । व्यावसायिक व्यक्ति प्रत्यक्ष राजनीतिमा आएपछि अबको उनको राजनीतिक भविष्य के होला भन्ने जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक हो ।
प्रस्तुति ः निरज पीठाकोटे मगर
नेपालमा नगर प्रमुख देशकै प्रमुख हुने संस्कार छैन : जिसी
पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसी विकसित मुलुकमा जस्तो हाम्रो मुलुकमा नगर प्रमुख देशकै प्रमुख हुने संस्कार नभएको बताउँछन् । यसैले उनले त्यसतर्फ कुनै सोच बनाएका छैनन् । यद्यपि पार्टीले दिए जुनसुकै जिम्मेवार पूरा गर्न भने उनी तयार छन् । भन्छन्, “पार्टीले दिए जस्तोसुकै जिम्मेवारी निभाउन पनि तयार छु ।”
अबको करिब डेढ वर्षको अन्तरालमा जनताको पक्षमा केन्द्रित हुने गरी केही देखिने गरी काम गर्न सके केन्द्रीय वृत्तमा पुग्ने प्रबल सम्भावना छ । नेकपाका केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका जिसीले पोखराको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो मात्र खन्न सके पनि पोखरेलीको साथ पाउने देखिन्छ । उनको कार्यकालमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सीधा हवाई सम्पर्क होला भन्ने जिज्ञासा छ पोखरेली जनताको ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. विश्वकल्याण पराजुली जिसीले महानगरको भ्रष्टाचारमा दोषीलाई कारबाही गर्न सकेमा धेरै पोखरेली जनताको मन जित्न सफल हुने दाबी गर्छन् । “मेयर, उपमेयरसहित २२ वडाध्यक्ष जितेको नेकपाले जनताको भावनाअनुसार काम गरेको खण्डमा भोलिको मार्गदर्शन निर्धारण गर्ला, अन्यथा खै के भन्न सकिएला र ?,” पराजुली भन्छन्, “जिसीको स्वभाव अलि फरक भएकाले हिजोका बाचा कसमअनुसार काम गरेमा भोलिको मार्गप्रशस्त हुने सम्भावना छ ।” खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापन गर्नतर्फ ध्यान दिँदा पनि राजनीतिक नेतृत्व असफल हुँदै गएको उनी बताउँछन् ।
“कर्मचारी समायोजनको झमेला, क्षमतावान कर्मचारीको अभाव, राजस्व दायरा बढाउन नसक्नु, मेरो ठाँउमा मैले बनाउनु पर्छ भन्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा अझै विकास नहुँदा मैले लिएको सोचअनुसार काम हुन सकेको छैन,” जिसीले भने, “पोखराको समग्र विकासका लागि सपना देखाउने गरी ढिलै भए पनि सहरी योजना आयोग स्थापना भएको छ ।”
महानगरमा विकासका केही कदम अघि बढेको त छ तर धीमा गतिमा । महानगरलाई चाहिने ३ सय २५ वटा कानुनमध्ये केही मात्रै बनेका छन् । उनको महानगरको कार्यालयदेखि हरेक वडाको भवन र वडादेखि नगरसम्मको सडक पीच गर्ने लक्ष्य छ । चीनका विभिन्न सहरसँगको मितेरी साइनोले पोखरामा सोलार लाइट, जाइकाको सहयोगमा खानेपानी सेवा र फेवातालसहित ९ वटा तालको संरक्षणलगायतका परियोजनालाई चुस्तदुरुस्त पार्न सके मात्र भने पनि मेयर जिसीलाई ठूलो उपलब्धि हुने देखिन्छ ।